Git Sangit News » असोज १ गते सम्पूर्ण देशबासीलाई घरघरमा दीपावली गर्न आह्वान,
असोज १ गते सम्पूर्ण देशबासीलाई घरघरमा दीपावली गर्न आह्वान,
२८ भदौ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बिरामी दिवस आउँदो असोज १ गते नेपालमा पनि विशेष कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सन् २०१९ सेप्टेम्बर १७ देखि संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको बिरामी दिवस केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र सम्मानका लागि आह्वान गर्दै मनाइने स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले जानकारी दिए ।
बिरामी दिवसलाई यस वर्ष स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा केन्द्रित गरिएको छ । यस वर्षको नारा ‘सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित बिरामी’ तय गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित नभएसम्म बिरामी सुरक्षित नहुने भएकाले यस वर्षको बिरामी दिवस स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा केन्द्रित गरेको डा. पोखरेलले बताए ।
बिरामी दिवसको अवसरमा असोज १ गते साँझ ७ बजे काठमाडौंको माइतीघरमा दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम राखिएको छ । त्यसै अवसरमा को’रोना सं’क्रमितको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने र मृ*त्यु भएका सं’क्रमितको चीर शान्तिको कामना गर्दै मौनधारण गर्ने कार्यक्रम छ ।
असोज १ गते साँझ ८ बजे सम्पूर्ण देशबासीलाई दिपावली गरेर स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको मनोबल बढाउन सरकारले आह्वान गरेको छ । त्यस्तै को’रोना सं’क्रमणका कारण मृ*त्यु भएकाहरुको नाममा एक मिनेट मौनधारण गर्न पनि आह्वान गरेको डा. पोखरेलले बताए ।
प्रकाशित मिति २८ भाद्र २०७७, आईतवार १४:१७